... သူတို့ကပြောပါ: "အဲဒီမှာရဲဘော်ရဲဘက်များ၏အရသာနှင့်အရောင်": သငျသညျအဘယျသို့ဆိုလိုဘူး ?? | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
... သူတို့က "အရသာနဲ့အရောင်အတွက်မိတ်ဆွေမရှိဘူး" ဟုပြောကြသည်။
အဆိုပါအရသာများနှင့်ရဲဘော်ရဲဘက်များနှင့်မအရောင်အရသာနှင့်အရောင်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းရိပ်မိလို့ပဲ။ ကျနော်တို့ကွဲပြားခြားနားသောဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တူညီတဲ့ဟင်းလျာများ၏အရသာကို, တူညီတဲ့စားဆင်ယင်၏အရောင်နည်းနည်းကွဲပြားခြားနားခံစားရနှင့်ကြည့်ရှုပါ။ ထိုအကြောင်းကြောင့်တစ်ဦးအပြည့်အဝတော့သည်ဦးစားပေးနှင့်အတူလူနှစ်ဦး၏ကမ္ဘာ့အဆုံးမဲ့ထား၏အရသာကိုနှင့်အရောင်ရှိသည်သောအမှုအရာများမတည်ရှိပါဘူး။ တချို့ကွာခြားချက်အစဉ်အမြဲရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်, လူတွေအချင်းချင်းဆက်သွယ်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြသည်။ ငါ့အဆွေခင်ပွန်း, ငါ့အရသာ, ဝါသနာ, အမြင်များအချို့ကိုမျှဝေပါ။ အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်တဦးချင်းစီတဦးတည်း။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်သူငယ်ချင်းများကိုဖြစ်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါဟာဆက်ဆံရေး၏ကနဦးတည်ထောင်များအတွက်ဘုံပလက်ဖောင်းဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, လူတွေကိုသိကျွမ်းရသူတို့တစ်တွေဘုံဘာသာရပ်စိတ်ဝင်စားသည့်အခါဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်စတင်။ ငါအိမ်ထောင်ဖက်ရှာမနိုင်သည့်အရသာ, ငါသည်မကျင့်။ အများဆုံးက virtual နှင့်အတူဤအရဲဘော်ရဲဘက်များ၏သို့သော်အချို့။ သို့သော်ဤအသေးစိတျဖြစ်ကြသည်။ စစ်မှန်သောငါယခုအချိန်အထိအဘယ်သူမျှမပူးပေါင်းချင်ခဲ့တယ်အရာမှတဦးတည်း quirk ရှိသည်။ ငါကပြင်ပမှာဘယ်လောက်အအေးထွက်ရှာရန်လိုအပ်သည့်အခါ, ငါပြတင်းပေါက်ဖွင့်ကွာထွက်အမှီနှင့်လုံးဝအေးခဲစောင့်ဆိုင်း။ ပထမဦးဆုံးစက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းအေးခဲလျှင်, အေးအပြင်ဘက်ပါပဲ။ တစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုရှင်းလင်းသောလက်မောင်းဒဏ်ငွေထို့နောက်အအေး tolerates လျှင်။ ထိုအခါပွင့်လင်း loggia အေးခဲနေသောမတိုင်မီအဝတ်အချည်းစည်းသွားကြဖို့ချစ်ကြတယ်။ တူသောအအေး feeling ။ နှင့်အခြားအရာအားလုံးတို့အတွက်ရဲဘော်ရဲဘက်ချင်ပါတယ်ရှိပါတယ်။ 🙂
နေရောင်အမှုဖြစ်လျှင်ငါ၏အဆွေငါ့အ Clone ပါလိမ့်မယ် ... ကျနော်တို့ဒီလောကနှင့်တစ်ဦးချင်းစီအတွက်အားလုံးတစ်ဦးချင်းစီရှိပါတယ် ...
Alas ။ ။
အဘယ်သူမျှမ, အပြည့်အဝနှင့် SCM ပွဲစဉ်အတွက်နိုင်ရန်အတွက် .. ; -)) ကောင်းပြီ, ကိုယ်ပွားစဉ် brainwashing နှင့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအတူတက်မလာကြဘူး ..
Друзья есть. Но о вкусах не спорят Да и зачем? Что от того, что моя сокурсница может носить «тургеневское «платье при этом надеть ботинки станет глупее или подлее? Дело разве в этом. Главное. что друзья всегда готовы тебе помочь, если требуется. а мне все равно любят ли они рок, классическую музыку, каких политических взглядов они придерживаются и проч. Главное, что по жизни они рядом и не предадут.
«На вкусы и цветовые предпочтения товарищей нет» звучало бы правильней)
А то это «на вкус и цвет» наводит мысль о каннибализме:)
ဒါ !!! သူငယ်ချင်းများကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားအမြင်, ပန်းတိုင်, အိပ်မက်, ဒါပေမယ့်စစ်မှန်သောမိတ်ဆွေတစ်ရှိသည်, သင်တို့ထံကအလွန်ကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်, မခွဲခြားဘဲဤအမှုအလုံးစုံတို့ကို၏, နေပါသေးသငျသညျကိုခစျြ !! !
ငါအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ (ကောင်လေး !!!) ရှိသည်, ကျနော်တို့အရသာ, အကျိုးစီးပွားနှင့်ထင်မြင်ချက်များအတွက်ဘုံထဲမှာလုံးဝဘာမျှမရှိသည်, ဒါပေမယ့်သူသည်သင်တို့ကို, နှလုံးနှလုံးစကားပြောရန်အော်ဟစ်သူကအမြဲထောကျပံ့နိုငျတျောမူသောအားဖြင့်သာလူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် !!!
Buchenwald ဟစ်တလာ svo- တစ်ခုချင်းစီ
ဟုတ်ပါတယ်, သငျသညျမြည်းစမ်းအရောင်မှမိတ်ဆွေများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤသူကားအလိုလျှင် (ကကြီးမြတ်တွေ့ရှိမှုဖြစ်သကဲ့သို့), မြတ်နိုးဖို့, ရှုံးဖို့မကြိုးစားကြည့်ပါ။ ထိုအပင်ကွဲပြားခြားနားသောထင်မြင်ချက်များရှိလိမ့်မည်သည့်အပေါ်နားလည်မှု, ကံမကောင်း, naydti ခေါင်းစဉ်နှင့်အတူ: အစိုးရ, မိသားစု, အလုပ်, အတိတ်, ဆွေမျိုးသားချင်းများ, အနုပညာရှင်များ, အဆိုတော်တွေ, etc ၏သဘောထား .....
«На вкус и цвет товарищей нет» это называется каннибализм :-)) Разве можно товарищей нямкать? :-))
ထိုကြောင့်ပါပဲ။ လူတိုင်းမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အရသာရှိပါတယ်ဘယ်သူဖရဲသီးနှင့်အတူအဘယ်သူနှင့်ဝက်သား hryaschik likes ...
အရသာအဘို့အဘယ်သူမျှမကစာရင်းကိုင် -Or- ။
Posted in, စိတ်ပညာ
22 အဆိုပါဒေတာဘေ့စဖို့ query လုပ်တဲ့အခါ, 0,319 စက္ကန့်ကျော် Generate ။